Soo-saareyaasha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Raw Trenbolone Acetate - Warshadda
Root Trenbolone acetate budada waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah alaabooyinka ugu xoogan ee ficil ahaan, taasoo keeni karta faa'iidooyin badan. Dhaqdhaqaaqa qaar ayaa ugu yeeraya kofuubka ama boqorada adduunyada diyaargaro isku mid ah. Budada Trenbolone Acetate waxay leedahay qaar ka mid ah waxyaabo adag oo adag. Tani waxay u oggolaanaysaa steroid in uu helo xarumaha xajinta iyo qufuca ee ku jira jidhka kuna lifaaqan qaybahaas.
Video Raw Trenbolone Acetate (10161-34-9) video
Root Trenbolone Acetate budada (10161-34-9) Description
Raw Trenbolone Acetate budada, oo lagu iibiyo magaca tayada sida Finajet iyo Finaplix iyo kuwa kale, waa daawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) oo loo isticmaalo daawada xoolaha, gaar ahaan si kor loogu qaado faa'iidada xoolaha iyada oo kor u qaadeysa koritaanka murqaha xoolaha. Waxaa lagu siiyaa cirbadaha murqaha.
Ciyaartoyda iyo kuwa jir-dhiseyaashu waxay isticmaalayeen budada Raw Trenbolone Acetate iyagoo isticmaala daroogada jirka iyo daroogada wax-qabadka muddo tobanaan sano ah. Waxaa jira tiro badan oo faa'iido leh sida jirka jirka iyada oo la adeegsanayo budada Trenbolone Acetate sida AAS, maxaa yeelay waxaa lagu qiyaasay in ay qiyaas ahaan shan jeer ka badan tahay waxtar iyo ka xoog badan testosterone. Si ka duwan testosterone, budada Raw Trenbolone Acetate ma keento wax dareere ah oo dheecaan ah marka la helo tiro muruq ah. Tani waxay u oggolaanaysaa in jidh-dhisayaashu ay u muuqdaan kuwo ciriiri ah, taasina waa sababta ay u badan tahay in la isticmaalo marka la diyaarinayo dhacdooyin tartan.
Root Trenbolone Acetate budada (10161-34-9) Smamnuucista
Product Name Raw Trenbolone budada Acetate
Magaca Kiimikada Trenbolone acetate; 10161-34-9; Finaplix; Trenbolone 17-acetate; Qeybta TS; Trenbolone (acetate)
Molecular Wsideed 312.4
barafku Psaliid 90- 92ºC
Application Raw Trenbolone budada Acetate waa mid ka mid ah steroids ugu awoodda badan oo leh karti kor u qaadida waxqabadka weyn gaar ahaan ciyaartoyda iyo dhismayaasha jirka. Daawada Trenbolone Acetate waxay ka waxtar badan tahay testosterone haddii si habboon loo isticmaalo iyo sida ku cad talooyinka.
Waa maxay budada Raw Trenbolone Acetate (10161-34-9)?
Duufaanta Trenbolone Acetate waa steroid aad u xoog badan, waxaana loo tixgeliyaa steroid weyn oo ka mid ah farsamoyaqaannada waaweyn ee kor u qaada. Tani waa mid ka mid ah steroids ugu badan ee anabolic ee suuqyada waxayna bixin karaan waxtarrada aan ka duwaneyn steroid kale. Budada Trenbolone Acetate waxay sidoo kale ku dhacdaa khuraafaadka badan ee caalamka anabolic steroid, laakiin waxaan rajeyneynaa inaan awoodi karno inaan ka saarno khuraafaadkaas iyo inaan helno garasho adag oo ku saabsan xarunta. Trenbolone Acetate budada waxaa si rasmi ah loogu sifeeyay sida darajada caafimaadka xoolaha ee anabolic androgenic steroid. Hormoonka Trenbolone laftiisa ayaa markii hore la abuuray 1960 dabayaaqadii iyo version Acetate waxaa lagu iibin doonaa magaca Finajet iyo Finaject.
Sidee budada Trenbolone Acetate loo yaqaan (10161-34-9) shuqullada
Root Trenbolone Pure Acetate waxay leedahay qaar ka mid ah guryaha xirxiran. Tani waxay u oggolaanaysaa steroid in uu helo xarumaha xajinta iyo qufuca ee ku jira jidhka kuna lifaaqan qaybahaas. Testosterone waxay si dabiici ah ugu lifaaqi doonaan kuwa soo dhaweeyaha, laakiin cilmi-baaris ayaa muujinaysa in Tren Acetate ay isku dhejiso xiriirka dib-u-qabsiga marka loo eego testosterone. Receptors waxay u gudbiyaan macluumaadka qaybaha kale ee jirka.
Marka qandaraaslayaashu ay u kobciyaan isbeddelada cusub, kuwa soo dhaweeyayaashu waxay ku qasbi doonaan inay jidhka ku dhaqmaan siyaabo kala duwan. Isticmaalka steroid waxay bedeli kartaa qaabka jidhku u shaqeynayo borotiinka iyo carbohydrateska. Halkii laga rogi lahaa maaddooyinkaas baruurta, jidhku wuxuu ka kooban yahay muruqyada ka yimaada xeryaha. Badeecada Tren Acetate waxay sidoo kale joojisaa jirka in ay cuntada u rogto dufanka xad-dhaafka ah waxayna ka hortagtaa sii-deynta biyaha. Noocyo kale oo steroids ah ayaa keena muruqyada inay ku faafaan biyo badan, taas oo horseedi karta miisaanka. Kareemka Tren Acetate wuu ka fiican yahay testosterone haddii si haboon loo isticmaalo iyo sida ku cad talooyinka. Qaadashada wareegga saxda ah ee Trenbolone Acetate wuxuu noqon karaa mid ka mid ah wareegyada ugu weyn ee waxqabadka waxqabadka si markaa lagu gaaro natiijooyinka la rabo oo ammaan ah iyo muddo gaaban.
Daawada Trenbolone Acetate waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa qiyaasta 35-150 mg / maalin, iyo intaa ka badan 50-100 mg / maalin. Xaaladda 35 mg guud ahaan guud ahaan waxay ku haboon tahay marka ay leedahay dareenka shakhsiyeed ee sarreeya ee saameynta daawooyinka gaarka ah ee trenbolone. Marka isticmaalka trenbolone uu yahay mid hooseeya oo wareeg ah oo loo baahan yahay, waa in lagu daro steroid kale oo lagu mudo. Masteron waa doorasho wanaagsan ujeedadaas. Doorasho kale oo kala duwan waa testosterone.
Root Trenbolone Acetate budada (10161-34-9) Waxay isticmaashaa
Tren Acetate wuxuu u dhaqmaa sida badan steroids kale. Waxay kor u qaadeysaa awooda jidhkaaga ee aad ku sameysid borotiinka waxayna ka caawisaa unugyada muruqyadaada inay heystaan ​​nitrogen badan. Marka jirkaaga uu awoodo inuu abuuro borotiinka si dhakhso ah, iyo marka dhismaha dhismaha ee borotiinnada (sida nitrogen) ay ku jiraan waxyaabo badan, waxaad la kulmi kartaa koritaanka murqaha miisaanka. Taas ka sokow, Trenbolone Acetate ayaa sidoo kale ka shaqeyneysa kor u qaadista isugeyn sida koritaanka insulin, kaas oo ka masuul ah hagaajinta iyo dib u habeynta unugyada jirkaada oo dhan. Waxa kale oo ay kordhisaa tirada dhiigga gaduudan. oo leh unugyo dhiig oo casaan badan, waad ka sii fiicnaan kartaa muruqyadaada waxayna siin kartaa jawi asaasiga ah ee koritaanka.
Soo iibso Trenbolone Acetate budada laga bilaabo Buyaas.com